(L)asa izao, izao dia izao… | NewsMada
(L)asa izao, izao dia izao…
Tany ambadiky ny 30 taona lasa no nampahalaza ny fomba fitenenana teo anivon’ny antoko politika iray izay: lasa izao, izao dia izao… Nafanafana ratsy ny tontolo politika tamin’izany, ary fitaomana olona hiditra amina dingana vaovao ny raharaha.
Amin’izao dingana vaovao irosoan’ny firenena izao, tsaroana ny hoe: “Lasa izao, izao dia izao… ” Efa mandeha tokoa ve ny raharaha? Azo lazaina hoe tsy misy ny sakana: manjaka ny filaminana sy ny fitoniana politika, eken’ny rehetra ny voka-pifidianana…
Inona sisa andrasana? Ny asa mivaingana amin’izay… Mialoha izany, mila mazava sy maty paika tsara ny hoe: iza no manao inona, aiza ary mankaiza? Mba tsy hisy kitsapatsapa sy fiherikerehana toy ny teo aloha intsony, fa efa ela niomanana.
Ho hitan’ny havana eo izay manao mosalahy na mitaredretra? Nefa tsy ananan-kavana ny raharaham-pirenena, tsy kiantranoantrano… Na amboako na amboan’olona, rehefa vandana dia kary? Mba tsy ho diso fanantenana ambony ihany ny vahoaka.
Mila vava asa sy vokatry asa mivaingana avy hatrany izany? Na ahoana na ahoana, eo ihany ny famindram-po amin’ny famelana ny fanombohana asa, ny fanendrena mpiara-miasa… Eo koa ny fametrahana mazava ny rafitra iasana, ny fomba fiasa…
Mety ho tsara avokoa izany rehetra izany? Na hahombiazana, hahitam-bokatra… Inona ny antoka? Arakaraka ny mpiasa ihany ny bainga voavadika eo… Hafa ihany ny hoe manana fahaiza-manao, za-draharaha, manana traikefa, azo itokisana…
Inona no iresahana izany eto? Mba tsy ho toy ny fitondrana teo aloha, lany andro amin’ny fisafidianana sy fanendrena olona. Ela ny ela, tapitra ihany ny fe-potoam-piasana: tsy hita mazava be ihany izay mba hoe iza no nahavita inona, aiza ary mankaiza?
Dieny izao fanombohana izao àry: ahoana na aiza ho aiza ny hoe (l)asa izao, izao dia izao…? “Raha mampiasa olona ianao, tsy tokony hisalasalana aminy; raha misalasala aminy ianao, tsy tokony hampiasa azy”, hoy ny ohabolana sinoa iray izay.